[ Jun 11, 2018 ] वीरगंजका मेयर जर्मनीका फ्यान, यस्तो छ उनको महानगरमा फुटबल क्रेज बढाउने योजना
प्रदेश नं २ को एक मात्र महानगर वीरगंज एक जमानामा फुटबलको क्रेजवाला सहरका रुपमा चिनिन्थ्यो। तर अहिले त्यस्तो छैन। संघीय समाजवादी फोरम नेपालबाट मेयरको चुनाव जितेका उद्योगी विजय सरावगी वीरगंजमा पुनः फुटबलको क्रेज बढाउन सकिने विश्वास गर्छन्। विश्वकप फुटबलको सेरोफेरोमा रहेर सरावगीसँग राधेश्याम पटेलले गरेको कुराकानी।
[ Jun 09, 2018 ] निर्माण व्यवसाय क्षेत्रको एकाधिकार तोडिन्छ : प्रचण्ड
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निर्माण क्षेत्रमा रहेको एकाधिकार तोडिने बताएका छन्। निर्माण व्यवसायीको प्रतिनिधिमण्डलसँग पेरिसडाँडामा आज भएको छलफलमा अध्यक्ष दाहालले भने, ‘काम रोक्ने तर समयमै काम सम्पन्न नगर्ने समस्या…
[ Jun 08, 2018 ] प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी चाहिने भए फेरि चुनाव गरौं
एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनले चुनाव राम्ररी जितेको थियो । अहिले यी दुवै पार्टीबीच एकीकरण भएको छ । यसले संसदमा नेकपालाई अत्यन्त बलियो बनायो, दुई तिहाइको नजिक पुर्याएको छ । उहाँहरु समेतको संलग्नतामा यो संविधान आएको हो र, उहाँहरु यो संविधान कार्यान्वयनमा इमान्दार हुनुहुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो ।
[ Jun 05, 2018 ] भाटभटेनी अनलाइन डटकम अब ई-सेवापसल डटकम
काठमाडौं । नेपालको चर्चित अनलाइन सपिङ पोर्टल भाटभटेनीअनलाइन डटकमलाई एफवानसफ्ट ईन्टरनेशनल प्रालिले एक्वायर गरेको छ । सफट्वेयरको क्षेत्रमा ख्याति कमाएको एफवान सफ्ट कम्पनी नेपालका ठुला आइटी कम्पनीमध्येको एक हो । भाटभटेनी अनलाइन डटकम नेपालको चर्चित् अनलाइन सपिङ पोर्टल हो ।
[ Jun 04, 2018 ] पढेलेखेको मान्छेले हलो जोत्नु हुँदैन भन्ने भ्रम छ, कसरी समृद्धि आउँछ ? – मदन राई
सरकारले पाँच वर्षमा कृषि क्षेत्रको उत्पादन दोब्बर बनाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रमसहित १३ खर्ब १५ अर्बको बजेट ल्याएको छ । बजेटमा कृषि, शिक्षा र भूकम्प पुनर्निर्माणलाई जोड दिएर सबैभन्दा बढी बजेट छुट्याइएको छ । तर कृषि र शिक्षाको अहिलेको अवस्था सुधार गर्न त्यति सजिलो छैन् । २०१३ सालदेखि नै…
[ May 24, 2018 ] पहिले यी कुरा बुझौं सबैले
वैकुण्ठ ढकाल । ६ बर्षको बालक, गृहकार्य गर्न अलि अल्छि मान्छ । कहिलेकाहिं गृहकार्यको सहजीकरण गर्न बस्दा दिमाग हल्लाउने प्रश्न सोध्छ । कहिले दिक्क बनाउँछ । सायद सामाजिक बिषयको गृहकार्य गर्दै थियो । त्यहाँ परिवारका सदस्यहरुको नाम…
[ May 24, 2018 ] वीरका निर्देशक भन्छन्– धुर्मुसलाई ब्राण्ड बनाइएको हो, सरसफाइ खर्च हामी नै व्यहोर्छौं
काठमाडौं । कलाकार धुर्मुसको अगुवाइमा भइरहेको वीर अस्पताल सरसफाइ र रंगरोगनको कार्य स्वास्थ्य मन्त्रालयको योजना र सरकारको बजेटबाटै भइरहेको अस्पताल प्रशासनले प्रष्ट पारेको छ । वीर अस्पतालका निर्देशक डा.भुपेन्द्र बस्नेतले कलाकारको ब्राण्डमात्र प्रयोग गरिएको बताए । …
[ May 23, 2018 ] रेल देख्न नपाएकाहरु ओलीजीको भाषण सुनेर हुरुक्क हुने हो, हामी होइन : महतो
सरकारले प्रस्तुत गरेको एक सय तीन बुँदे नीति तथा कार्यक्रममा संविधान संशोधन र तराई मधेशका विषय नसमेटिएको भन्दै मधेशवादी दलहरु असन्तुष्ट छन्। तर नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएकै दिन नपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधान संशोधनको विषयमा सहमति भइसकेको र मधेशी दल सरकारमा आउन तयार रहेको प्रतिक्रिया दिएका…
[ May 23, 2018 ] ‘भारत लाइनमा आयो, १० बुँदे कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण’
काठमाडौं । डा. राजन भट्टराई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय समितिमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका मामिलामा थोरै विज्ञमध्येका एक हुन् । नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह ईपीजीका सदस्यसमेत रहेका डा. भट्टराई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विदेश तथा सुरक्षा मामिलामा अनौपचारिक सल्लाह दिने जिम्मेवारीमै छन् । यद्यपि ईपीजीको कार्यकाल एक महिनामा सकिएपछि उनी औपचारिक…
[ May 21, 2018 ] नेकपा : भोजवादी कि जनवादी ?
भियतनाममा क्रान्ति सम्पन्न भएपछि पनि हो ची मिन्हले रबरको चप्पल लगाउन छाडेनन् । जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भइसके पछि पनि माओत्सेतुङ पुरानो कोट लगाएरै जनताका माझमा पुगिरहेका देखिन्थे, जतिबेला उनको तस्वीर अंकित नोट देशभरि प्रचलनमा आइसकेको थियो । क्रान्ति सम्पन्न हुनु…
[ May 20, 2018 ] ओली - प्रचण्डले पार्टीको नाम खोस्न सक्दैनन्, नेकपा हाम्रो होः ऋषि कट्टेल
नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकतापछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको गठन भएको छ। निर्वाचन आयोगमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ऋषि कट्टेल नेतृत्वमा दर्ता कायम छ। अर्कोतिर नेपालमा क्रान्तिकारी कम्युनिस्टबीच एकताको विषयमा समेत छलफल चलिरहेको छ। यही सेरोफेरोमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष ऋषि कट्टेलसँग नवगठित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नाम, क्रान्तिकारी ध्रुव्रीकरण र…
[ May 18, 2018 ] ‘अब किरण, बाबुराम र विप्लवले पनि आफूलाई करेक्सन गरेर आउनुपर्छ’
प्रदेश २ का चिरपरिचित नेता रामचन्द्र झा बौद्धिक नेताका रूपमा मानिन्छ । कुनै पनि विषयमा एतिहासिक तथ्य दिन सक्ने क्षमताका उनी कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट आएका नेता हुन् । एमालेबाट विद्रोह गरी माओवादी हुँदै नयाँ शक्ति पार्टीमा गएका थिए । तर त्यहाँ विचार र सिद्धान्तमा मतान्तर भएपछि पुनः माओवादी केन्द्रमा फर्केका हुन्…
[ May 14, 2018 ] मोदीको स्वागतमा जनकपुरमा कति खर्च भयो ? मेयर भन्छन् : अब हिसाब खोज्छौं
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणको पूर्वसध्यामा जनकपुरमा २० वर्षमा नभएको विकास २० घण्टाभित्रै भयो । रातारात सडकका खाल्डाखुल्डी पुरिए, विमानस्थलदेखि जानकी मन्दिर तथा रंगभूमि मैदानसम्म जाने मुख्य सडकको कायापलट भयो । समग्र मधेसकै सबैभन्दा खराब शहर बनिसकेको जनकपुरले आंशिक रुपमा…
‹ First Previous 25 26 27 28 Older